राष्ट्रपतिमाथि ‘प्राङ्क’ ! कडा कारबाही हुने – Butwal 24 News
September 10, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on राष्ट्रपतिमाथि ‘प्राङ्क’ ! कडा कारबाही हुने
सेप्टेम्बर ७ को बिहानै युट्युबमा एउटा भिडियो अपलोड भयो । ८ मिनेट ३७ सेकेण्डको भिडियोमा समीर नाम गरेका एक किशोरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्राङ्क गरेको दाबी गरेका छन् । उक्त भिडियोको सुरुवातमै किशोरले भिडियोलाई रमाइलोका रुपमा मात्रै लिनुहोला भनेका छन् ।तर, प्राङ्क भनिएको भिडियो रमाइलोमा मात्रै सीमित छैन । किशोरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अश्लील मजाक गरिएको छ ।
भिडियोको थमनेलमै एकातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तस्वीर राखेर उनको भनाई भन्दै पुलिस केस गर्छु तँलाई भन्ने राखिएको छ भने दायाँतर्फ किशोरको प्रश्नका रुपमा ‘केपी ओलीसँग जोडेर प्रश्न गरिएको छ र त्यसैको थमनेलको प्रयोग गरिएको छ ।
अनि किशोरले आफू पोखराबाट पत्रकार बोलेको भन्दै सुनाउँछन् । महिलाको जस्तो सुनिने आवाजमा पोखराबाट पत्रकार बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्छ । अनि किशोरले आफू पोखराबाट पत्रकार नै बोलेको जवाफ दिन्छन् । त्यसपछि किशोरले सुरुमै महङ्गो गलैंचा र २५ करोडको कारको कुरा के हो भनेर सोध्छन् ।
उताबाट त्यो हल्लामात्रै भएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जवाफ आउँछ । अनि तपाइँ को बोलेको भनेर फेरि प्रश्न गरिन्छ । त्यसपछि किशोरले आफू समीर पत्रकार भएको बताउँछन् । अनि फेरि किशोरले २५ करोडकै कारको प्रश्न गर्छन् र त्यसको जवाफमा त्यो सबै हावा कुरा भएको र ट्रोल मात्रै बनाइएको जवाफ आउँछ ।
कुराकानीकै क्रममा किशोरले विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाई र केपी ओलीको सम्बन्ध गाढा छ भन्ने सुनिन्छ के हो ? भनी प्रश्न गर्छन् । जवाफमा महिलाको जस्तो सुनिने आवाजबाट आफू राष्ट्रपति भएको र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुराहरु, सर सल्लाह आदिका कारण भेटघाट भइरहने भएकाले उहाँ (केपी ओली) आफूसँग नजिक भएको जवाफ आउँछ । त्यसै कारणले मानिसहरुले नराम्रो ट्रोल बनाएको कुरा उताबाट आउँछ । अनि यी कुराहरुलाई बिर्सिदिउँ भन्दै जवाफ आउँछ ।
तर, किशोरले फेरि प्रश्न गर्छन्, ‘बिर्सिदिउँ भन्दा पनि तपाईँ र ….बीच गाढै सम्बन्ध छ भन्ने कुरा आइराथ्यो, त्यही भएर’ … । त्यसपछि उताबाट जवाफ आउँछ, ‘उहाँलाई म सम्मान गर्छु, उहाँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे । उहाँलाई म दाइजस्तो मान्छु भनेर प्रतिक्रिया आउँछ । त्यसपछि फेरि किशोरले सोध्छन् कि के तपाई दाइ सोच्नुहुन्छ भनेपछि …?
उताबाट फेरि दाइ नै सोच्छु भनेर उत्तर आउँछ । त्यसपछि किशोरले अर्को प्रश्न गर्छन् कि तपाईले दाइ भन्दाखेरि केपी ओली जी लाई हर्ट होला नि ? त्यसपछि उताबाट जवाफ आउँछ, ‘कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पत्रकार साथी भएर ?’ फेरि किशोरले तपाइँले दाइ भन्दा केपी ओली जीलाई मन दुख्न सक्छ भनेर …’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
अनि तपाइँले त्यही प्रश्न सोध्नका लागि तपाईले फोन गर्नुभएको हो भने फोन राखिदिनुहोला धन्यवाद भन्दै फोन राखिन्छ । त्यसपछि फेरि किशोरले सम्पर्क गर्छन् र एउटा रमाइलो प्रयांक भिडियो बनाउन लागेको बताउँछन् । उताबाट रमाइलो कोसँग गर्ने, त्यो कुरा सोचेर मात्रै फोन गर्नुहोस् भन्ने जवाफ आउँछ । भिडियोको अन्तिममा राष्ट्रपति भन्दै कुरा गर्ने व्यक्ति सुदिप भएको बताइन्छ र यो भिडियोले दर्शकलाई प्राङ्क गरेको दाबी गरिन्छ ।
यो त भयो भिडियोको कुरा ।
अब प्रश्नचाहिँ प्राङ्क कोसँग कसरी गर्न पाउने, राष्ट्रपति मजाकको पात्र हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा कुरा गरौं ।
राष्ट्रपति हेड अफ स्टेट अर्थात् राष्ट्र प्रमुख हुन् र संविधानको संरक्षक पनि हुन् । राष्ट्र प्रमुखमाथि प्रयांक वा राष्ट्रप्रमुखको नाममा क्यारिकेचर गरेर बनाइने भिडियो वा असभ्य शब्दावलीको प्रयोगलाई रमाइलोकै रुपमा लिन मिल्ला ? के राष्ट्रपति मजाककै पात्र हुन् त ?
यस सम्बन्धमा मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीसँग कुराकानी गर्दा भिडियोमा गम्भीर आपत्ति रहेको र यस सम्बन्धमा भोलि (बुधबार) छलफल गरेर एक्सन लिने बताएका थिए । तर, बिहीबार साँझ सम्पर्क गर्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले यो भिडियोबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताए । यद्यपि भिडियोप्रति आपत्ति रहेको ती अधिकारीले बताए ।
सरकारले मुद्दा चलाउन मिल्छ ः अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई
यस सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई यो अपराध भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको राय लिएर मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँग सक्षिप्त कुराकानी गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपति मात्रै नभएर सामान्य नागरिक विरुद्ध पनि अफवाह फैलिने, निराधार र झुट्टा आरोप लाग्ने सामग्री प्रकाशन वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारण गरेपनि त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुने भएकाले कारवाही हुने बताए ।
भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपति मात्रै होइन, कुनै नागरिकका विरुद्धमा पनि अफवाह फैलिने प्रकृतिका, निराधार, झुट्टा आरोप लगाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारण गर्न पाइँदैन । कुनैपनि नागरिकका विरुद्धमा पाइँदैन, त्यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुन्छ ।
संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको जिउ धन, आवास र शरीरको अनतिक्रम्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण त्यो अनतिक्रम्य हुनेछ र त्यो व्यक्तिका विरुद्धमा पनि गर्न पाइँदैन । राष्ट्रपतिका विरुद्ध गरियो भने त्यो थप गम्भीर विषय हुनेछ, गैरकानुनी र गैर संवैधानिक विषय हुनेछ । यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको नाममा हाम्रो संविधान, कानुन, सम्पदा र संस्कृतिलाई तोड्ने काम हो, यो दण्डनीय छ ।’
नमिल्ने लुगा लगाएको भन्दै युवतीलाई विमानबाट निकालियो